ထမင်းအိုး: Happy Birthday!!!
Happy Birthday နော်....မမ
ပျော်ရွှင် သောဘ၀ကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့သော မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ။
ံ့HAPPY BIRTHDAY ပါနော်...
အယ်.. မွေးနေ့လား. ဘယ့်နှယ် အခုတလော ပြွတ်မွေးကြတယ်... ဟက်ပီးဘတ်ဒေးပါ.....း)
Happy Birthday Ngenge
Happy Birthday မမမိုးးးးးးးးးးး :)
ဘာမှလည်း ကျွေးဘူးး ဟင့်
Happy Birthday ပါ မိုးကောင်းသူလေးရေ...
ချစ်သောကိုယ်တော်ကြီးနဲ့အတူ ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းပါစေရှင်..
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ချစ်သော အဟမ်းအဟမ်းကြီးနဲ့ ရာသက်ပန် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေနော်။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် မိုးကောင်းသူရေ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ၊ မွေးနေ့လေးမှ အစပြု၍ ချစ်သောမိသားစုနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ တသက်လုံး လိုလေသည့်မရှိ နေနိုင်ပါစေ
ရှယ် ချက်ကျွေးပေတော့ အမရေ
sorry for one day late!
Happy Birthday ပါဗျို့
နောက်ကျသွားတယ်။ အိမ်မှာ အင်တာနက်ကို မသုံးဖြစ်လို့ ခုမှသိပါတယ်။
May you baahappier, wealthier, healthier & wiser from this Birthday onwards...
Happy Belated Birthday. May your wishes come true...
မသိလိုက်လို့ မွေးနေ့ ပြန်လုပ်ပါဗျို့။
ံHappy Birthday ပါ ညီမလေး။
ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ အများကြီး ချက်၊ အများကြီး ကျွေးနိုင်ပါစေ။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းပေးကျသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။